မယ့်ကိုး: ‘လေငြိမ်စေမယ့် ...'
စိတ်ညွတ်ရာကြောင့် အိပ်မက်မှာ အရုပ်ထင်လာလေသလား။ မိုးသားတိမ်လိပ်တွေက ညို့မည်းကာ ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံး မှိုင်းမှောင်နေကာ ။ သူကရော။ သူကလည်း တိမ်လိပ်ခဲရိပ်တွေလို အရောင်ဆင်တဲ့ ဝတ်စုံနဲ့။ လွမ်းလိုက်တာဆိုတာ မဖြစ်သင့်ဘူး။ တကယ်က ဒီမာရေကျောရေ ပလွှားတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုကို မမြင်ယောင်ဆောင်လို့ ကျောခိုင်းထွက်သွားသင့်တာရယ်။ ဒါပေမယ့် အိပ်မက်ထဲမှာပင် အမှတ်သည်းခြေမရှိတဲ့ မိန်းမဟာ သူ့ကို အနီးဝန်းကျင်က ကျွမ်းဝင်သူတွေနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးနေမိတာ။
သူကတော့ နှုတ်ဖွင့်လို့ပင် စကားတစ်ခွန်းမဆိုချင်ဟန်။ မပြုံးမရယ်ဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ပင် အနားမှာ ရှိနေရာက ခုံတန်းလျားတစ်ခုမှာ အတူယှဉ်ထိုင်မိတာ။ အဲဒီအချိန်ကျမှ စိတ်အေးကြည်သာစွာ သူ့ကို ကြည့်မိတဲ့အခါ မိုးမရွာခင် မိုးကြိုးပစ်ခံခဲ့ရတာ။ အိပ်မက်ထဲမှာတော့ ကိုယ့်အလောင်းကိုယ် မမြင်ခဲ့ပါဘူး။ အိပ်မက်ရဲ့ ပြင်ပမှာတော့ ရင်ကွဲနာကျသေနိုင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ရုတ်ချည်းလန့်နိုးကာ အိပ်ရာထက်မှာ ချောက်ချားစွာ ထထိုင်မိ။ အကျင့်ရနေတဲ့ လက်တွေက ဖုန်းကို ကြည့်လိုက်တော့ ၃ နာရီ ၂၃ မိနစ်။
အရုဏ်ဦးမှာ မက်တဲ့ အိပ်မက်တွေက မှန်တတ်သတဲ့လား။ မဟုတ်ဘူး။ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အိပ်မက်တွေက မပက်သက်ခင်မှာတင် မှန်လွန်းနေခဲ့တာ။ ပြီးတော့ အဲဒီအိပ်မက်တွေဟာ တစ်လအတွင်းမှာ ဖြစ်ပျက်လာတတ်တာ။ ကြောက်လိုက်တာ။ မဟုတ်ဘူး။ စကားလုံးကို ပြင်ရမှာ။ ဒါပေမယ့် အခုထိ ဆက်စပ်သောဝေါဟာရကို မရှာနိုင်သေးပါ။
အိပ်မက်ထဲမှာ သူက…။ မဟုတ်ဘူး။ သူရဲ့ လက်စွပ်။ မဟုတ်သေးဘူး။ သူ့ရဲ့ လက်စွပ်က ဘယ်ဖက်လက်သူကြွယ်မှာ။ ဘယ်လိုပြောရမှာပါလိမ့်။ ကျွန်မ ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ စကားလုံးတွေကလည်း အဝေးလွင့်ပျောက်ကွယ်နေရဲ့။ ကိုယ်ချင်းစာမယ့်သူ ရှိပါ့မလား။ ရူးသွပ်သွားတဲ့သူတွေမှာသာ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံရနိုင်တာရယ်။
အမြင်ဝေဝေါးနေပေမယ့် မျက်ရည်ကျလို့ မရဘူး။ ပြတ်သားကြည်လင်နေတဲ့အာရုံသိစိတ်မှာ သူ့ပုံရိပ်သာ။ ပလက်တီနမ်လို သတ္တုဆိုတာမျိုးထက် သံဖြူလိုမျိုး သတ္တုနဲ့ဆင်တူသော၊ မျက်နှာပြင်မှာ အကြောင်းအခြစ်လေးတွေနဲ့ လက်စွပ်ကို ဘယ်ဖက်လက်သူကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူ။ ဘယ်လောက်အဖြစ်ဆိုးလိုက်တဲ့ မိန်းမပါလဲ။ လက်စွပ်လေးမှာ ပါးလွှာလွန်းတာမို့ သူ့လက်ကို ထိရှမှာ စိတ်ပူပန်သောကရောက်နေသေးသတဲ့။ ကျွန်မသိတာပေါ့ သူရယ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာ။ ရှိစေတော့။ ဝန်ခံရဲပါတယ်။ အမြင်ကန်းမတတ်ချစ်မိသူမို့ သူ့လက်ချောင်းလေးတွေ နာကျင်နေမှာ အိပ်မက်ထဲမှာတောင် စိုးရိမ်ပိုနေမိသူပါ။
ဒီတစ်ညတော့ ငိုပါရစေဦး။ အသိဥာဏ်ပျောက်နေတဲ့ မိန်းမဟာ ခြေတုန်လက်တုန်နဲ့ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်တယ်။ ဘယ်ဖက်လက်သူကြွယ်မှာ လက်စွပ်ဝတ်ဆင်ခြင်းရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ‘why do we wear rings on the left hand’ လို့ Google မှာ ရိုက်ပြီး ရှာတယ်။ ရလာတဲ့ အဖြေက လက်ထပ်လက်စွပ်၊ သစ္စာတိုင်လက်စွပ်တွေကို ဘယ်ဖက်လက်သူကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ကြပါတယ်တဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရှေးလူတွေဟာ vena amoris လို့ ခေါ်တဲ့ သွေးကြောဟာ နှလုံးသားနဲ့ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ထားတယ်လို့ မှားယွင်းယုံကြည်ခဲ့ကြသတဲ့။ ဒါကြောင့် လက်စွပ်နဲ့နှလုံးသားကို ချည်နှောင်ထိတွေ့ပေးနိုင်အောင် လက်ထပ်လက်စွပ်ကို ဘယ်ဖက်လက်သူကြွယ်မှာ ဝတ်ဆင်ကြသတဲ့လေ။ မျက်ရည်ဟာ မတားဆီးနိုင်ခင် တရဟောကျလာခဲ့။ Great! ဒီအာမေဋိတ်အပြင် ဘာများ ရေရွတ်နိုင်ဦးမှာလဲ။
ကောင်းတယ်။ သိပ်ကောင်းတဲ့ အိပ်မက်ပဲ။ ခပ်ရွဲ့ရွဲ့မိန်းမဟာ ဒီလိုတွေးနေပေမယ့် ကွန်ပျူတာကို ပိတ်ပြီး မအိပ်ရဲဘူး။ အိပ်မက်က ဆက်ရန်မရှိဘူးလို့ ဘယ်သူပြောလဲ။ ဒီတစ်ခါ အိပ်မက်ထဲမှာ ကျွန်မက မင်္ဂလာအခမ်းအနားဆီ မကြွရောက်နေပါဘူးလို့ ဘယ်သူမှ အာမ,မခံနိုင်ပါဘဲ။ ကျေးဇူးပြုပြီး မလှောင်ပါနဲ့။ အိပ်မက်မက်ပြီးသေသွားတဲ့လူ မရှိဘူးလို့ မပြောပါနဲ့။
အသက်ထွက်ခါနီးလူလိုပဲ အသက်ဝဝ ရှုလို့ မရဘူး။ အချိန်သိပ်မကျန်တော့ဘူး မဟုတ်လား။ သံဃာတော်တွေ ဟောတဲ့တရားကို ပြန်ကြားမိတယ်။ တွေ့ဆုံကြုံခိုက်ဟာ နောက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာမို့ အပြစ်တွေ ပြုမိရင် ပြေအောင် တောင်းပန်သင့်တယ်တဲ့။ သူ့ကို မမြင်ရပေမယ့် သူရှိရာအရပ်ကို မျက်နှာမူပြီး ပြောမိရဲ့။
‘တင်တဲ့ အပြစ်တွေကိုလည်း ကျေပါတယ်။ မရည်ရွယ်ဘဲ ပြုမိခဲ့တဲ့ အပြစ်တွေ ရှိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ပါ။’
ယုံပါ။သံသရာအစဉ်အဆက်ဆိုတာ ဒီမှာပဲ နိဂုံး။…။
စာရေးသူ မယ့်ကိုး at 4/15/2012 09:00:00 AM
သံသရာ အဆက်ဆက်ဆိုတာ ဒီမှာပဲ နိဂုံး....
16/4/12 11:46 PM
အိပ်မက်မက်ပြီး သေသွားရင်တော့ မလွယ်ဘူး ။ လားရာက အိပ်မက်တွေဆီဖြစ်နိုင်တယ် ။
17/4/12 6:49 PM
လက်စွပ်လေး တကွင်းတောင် မပိုင်တဲ့ ရွှေစင်ဦး လာဖတ်သွားတယ် အိမ်မက် မမက်ချင်ဘူး
20/2/13 11:07 AM
အင်း .. ကောင်းလိုက်တာ .. မယ့်ကိုးလေးကို အားကျပါရဲ့ရှင် :)
25/2/13 5:40 PM
ဘယ်ဘက်လက်သူကြွယ်မှာ လက်စွပ်ဝတ်တာ လက်ထပ်လက်စွပ်အတွက်ဆိုပေမယ့် ကျနော့်ကတော့ စေ့စပ်ထားတဲ့သူလဲ မရှိပါဘဲ ဘယ်ဘက်လက်သူကြွယ်မှာ ၀တ်ရတာကို ပိုသဘောကျတာ မယ့်ရဲ့။ ဒါ့ကြောင့်လဲ အလုပ်လျှောက်တုန်းက Foreigner Interviewer က လက်ထပ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိလားလို့ အမေးခံခဲ့ရတာ။ မယ့်ရဲ့ အရေးအသားတွေအတွက်တော့ ချီးကျူးဖို့မလိုအောင် ကောင်းပြီးသားမို့ဘာမှပြောတော့ဘူးနော်။
11/3/13 11:39 AM
ဘဝမှာ အခက်ခဲဆုံးအချိန်ပဲ။ ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော် မကောင်းဆိုးဝါးလို့ မြင်နေတယ်။ စိတ်တိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရိုက်နှက်တတ်လာတယ်။ ကျွန်တော့်အပြ...
ဥသြသံကြားပေမယ့် မနွမ်းလျသောသူရှိပါသလား။ ဥသြငှက်လေးသည် သူ့ကြည်နူးချမ်းမြေ့မှုများကို ဖွင့်အံနေခြင်းဖြစ်နိုင်သော်လည်း သူမကတော့ ဥသြသံလေးကြားတု...
စားသောက်ဆိုင်တန်းမှာ ညစာအတူစားမယ့်မိတ်ဆွေက ရွေးလိုက်တဲ့နေရာရဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်ကို ကျွန်မနေရာယူဖို့ ပြင်နေတုန်းမှာ ယောက်ျားတစ်ယောက် ရောက်...
ချစ်ခင်ခြင်းငှာ မထိုက်တန်သော မိန်းမ
ငယ်ငယ်တုန်းက ကလေးသဘာဝမပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးသူတွေက ဒီလစ်ဟာမှုကို ပြန်လည်ဖြည့်ဖို့အတွက် ကလေးလို ချွဲနွဲ့နေလိုကြသတဲ့။ ထိုစိတ်ပညာ သုံးသပ်ချက်မှာ သူမအ...
၂၀၁၂ မှာ နောက်ဆုံးကြည့်ခဲ့သောရုပ်ရှင်မှာ 'The Tale of Despereaux' ဆိုတဲ့ ကာတွန်းကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒတ်စပရိုဒ်လို့ အမည်ရတဲ့ မွေးကတည...
ဝ နေသူ အပြစ်
ဘဝနှင့်ချီကာ ပြောရလျှင် အရက်စက်ဆုံး ၊ ကြေကွဲဝမ်းနည်းဖွယ်အကောင်းဆုံး၊ ကိုယ်ချင်းစာတရားအနည်းပါးဆုံး စကားမှာ ‘ဝနေတယ်နော်’ ဟူ ၍ ဖြစ်လေသတည်း။...
ကျွန်မချစ်သော သူမရဲ့ ဗိသုကာဖြင့် ခေါ်ငင်သော...
အမျိုးသမီးများအား နှိမ့်ချစော်ကားထားသော ကြော်ငြာတစ်ခုကို ဝေဖန်ထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို လွန်လေပြီးသောအခါတုန်းက ဗိသုကာစာစောင်တစ်ခုမှာ ကျွန်မ ဖတ...
တိုးဖွဖွရေရွတ်ရုံမျှနဲ့ နှလုံးသားဟာ ညင်းသဲ့သဲ့ရွေ့လျား။ အရာအားလုံးကို (သူမအတွက်) ဖန်တီးပေးနိုင်အောင် စွမ်းအင်ရှိရာ … အိပ်မက်။ တိမ်တိုက်။ ...
လေလှိုင်းထက်က စော်ကားရန်ပြုမှု အနုပညာ
‘ဘာလို့ အနိုင်ကျင့်စော်ကားရတာလဲ’လို့ တန်ဂိုက မေးတယ်။ ‘ သမီးက မကြာခဏရင်ကျပ်ပန်းနာဒဏ်ခံရတယ်လေ ။ ဒါကြောင့် သမီးက တခြားကလေးတွေလို ကျောင်းလုပ...
အသင်နားလည်ရန် မလိုအပ်သော မိန်းမတစ်ယောက်
ရည်ညွှန်း။ ။ အုတ်ဂူကို တံတွေးထွေးနေကျ အသင်များသို့ … “တံတိုင်းရဲ့အပြင်စည်း” နှစ်သစ်မှာ တကိုယ်တော် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားက “လောကမှာ...
ထိုင်းစာပို့သမားလေးနဲ့ မြန်မာအိမ်အကူလေးတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း
Durians and rambutans
အင်းလေး အင်းပေါခုံ ရေယဉ်မယ်များ မှတ်တမ်း (၃)
အရုပ်သက်သက် x x x x
ဆောင်းချမ်းမိုး - My Blog
ခင်လေးငယ် . . .
Moon Thet Pan
My Pot Art (1)
ကျွန်မချစ်သော မိန်းမများ (4)
literature by မယ်ကိုးရဲ့စာစုများ is licensed underaCreative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Singapore License by မယ်ကိုး .